Nagu saabsan - Hebei Ewin Enterprise Co., Ltd.
Loogu talagalay PP
PET dib loo warshadeeyay
Boorsooyinka Qudaarta / Qudaarta
Shayga wax ka turjumaya
HEBEI EWIN ENTERPRISE CO., LTDwaxaa la aasaasay 2003, Milkiilaha: wuxuu leeyahay waayo-aragnimo ka badan 26 sano oo ku saabsan bacaha. Wax ka qabashada ugu weyn ee boorsada Dukaanada, Dhiirrigelinta iyo hadiyado. Shirkadda waxay si dhakhso leh u kobcaysaa una sii xoogeysaneysaa, oo hadda waa wehel dhinac walba siinaya macaamiisha ka socota Yurub iyo Mareykanka
Buuggan iyo kuwa kale ee buugyarahayaga, alaabooyinka oo dhan waa la diyaarin karaa si loogu daro sumadda shirkaddaada iyo ujeeddooyinka. Waxaan sidoo kale ku siinnaa alaabada OEM ama shay naqshaddaada kuu gaar ah. Waxaan ku fiicanahay ilaalinta jadwalka dhoofinta iyo xakamaynta tayada, iyo sidoo kale qiimo wanaagsan.
Ewin, waxaan bixinnaa la-talin bilaash ah, waxaan awoodnaa inaan kugula tallinno dhammaan soo-saarka, dhoofinta iyo qodobbada miisaaniyadda ee mashaariicdaada. Waxaan hiigsaneynaa inaan ku siino ama aan kuu raadino soosaarayaasha ugu habboon ee leh alaabada tayada sare leh, waqtiga saxda ah iyo qiimaha ugu badan ee ku habboon baahidaada shaqsiyeed.
Annagu had iyo goor waxaan garab taagan nahay si aan u hubinno In Aad Hesho Wixii aad Ku amartay.